Nin iska dhigay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo lacag badan dhacay - BBC News Somali
Nin iska dhigay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo lacag badan dhacay
Image caption Mid ka mid ah tuugada ayaa iska dhigay madaxweyne Uhuru Kenyatta
Booliska dalka Kenya ayaa doonaya iney muddo 10 maalmood ah xabsiga kusii hayaan 7 nin oo lacag dhan 10 milyan oo shilin ka dhacay madaxda shirkadda Sameer Africa, iyadoo midkood uu isaga dhigay madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Wargeyska maxalliga ah ee Daily Nation ayaa shaaciyay in Saraakiisha ciidanka ay dalbadeen in la siiyo wakhti ay ku dhammeystiraan baaritaannada ay ku sameynayaan raggan tuuganimada lagu tuhunsan yahay.
Toddobada ruux oo Isniintii maxkamadda kasoo hor muuqday ayaa kala ah Joseph Waswa, Duncan Muchai, Isaac Wajekeche, William Simiyu, David Luganya, Gilbert Kirunja iyo Anthony Wafula.
Waxaa lagu eedeeyay iney isticmaaleen telefoon uu lambarkiisu yahay 0722 208842, kaasoo ay ka waceen guddoomiyaha shirkadda Sameer Africa oo lagu magacaabo Naushad Merali.
Mid ka mid ah ayaa taleefanka kula hadlay giddoomoyaha, isagoo isku yeelayay codka madaxweyne Uhuru Kenyatta, wuxuuna Mr Merali ka dalbaday inuu soo diro lacag lagu iibinayay dhul.
Waxay iska dhigayeen in ay Telefoonka kasoo waceen gudaha aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi.
Sida laga soo xigtay booliska, Mr Merali wuxuu dalka dibaddiisa ugu maqnaa safar ganacsi, markii ay raggan soo wacayeen.
Image caption Toddobada nin ayaa Isniintii kasoo hor muuqday maxkamadda
Wuxuu markaas ka dib madaxa maaliyadda ee shirkadda, oo lagu magacaabo Akif Hamid Butt, ku amray inuu fasaxo lacagta, isagoo markaas aaminsanaa in qofka lasoo hadlay uu ahaa madaxweynaha dalka.
Mr Butt ayaa loo sheegay in lacagta la bixinayay ay ahayd tii lagu iibinayay dhul ku yaalla xaafadda Milimani ee magaalada Nairobi, waxayna ragga tuugnimada lagu eedeynayo siiyeen akoon ka diiwaan gashan bangiga Equity, halkaasoo uu lacag 10 milyan oo shilin ah ugu shubay.
Howlgal ay booliska sameeyeen ayaa raggan lagu soo xiray 22-kii iyo 23-kii bishan Febraayo.
Dhaca telefoonnada Kenya ee lacagta la iska shubanayo
Tuugo si la yaab leh u xadday beer idil oo ku taalla Jarmalka
Baaritaannada lagu sameynayo ayaa isugu jira dambi ku saabsan tuuganimo iyo dambi kale oo ah iney iska dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan dowladda.